मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुन्दा मन्त्रीहरु नै आश्चर्यमा, खतिवडा नियुक्तिको अजेण्डा नै थिएन ! Bizshala -
मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुन्दा मन्त्रीहरु नै आश्चर्यमा, खतिवडा नियुक्तिको अजेण्डा नै थिएन !
काठमाण्डौ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक हुँदा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु नै आश्चर्यमा परेका छन्।
हिजोको मन्त्रीपरिषद बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई नै आश्चर्यमा पार्दै सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता तथा प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
ज्ञवालीले भदौ १९ गते र हिजोको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दा मन्त्रीहरु नै चकित भएका हुन् । उनीहरु आश्चर्यमा पर्ने कारण दुईवटा छन्: १. युवराज खतिवडाको नियुक्ति, २. सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान खोल्ने भनी तय गरिएको मितिमा भएको हेरफेर ।
हिजोको मन्त्रीपरिषद बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीकाअनुसार अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने अजेण्डा नै थिएन । डा. खतिवडालाई दिने जिम्मेवारीको विषयमा सामान्य चर्चा समेत भएको थिएन । तर, बैठकको निर्णय माइन्यूट गर्दा डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउने र मन्त्री सोसरहको सुविधा दिने निर्णयको बुँदा थप्न लगाइएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णयहरु मुख्यसचिवले माइन्यूट गर्ने गर्छन् । हिजो भएको निर्णय केही परिवर्तन भई आएको अर्को नयाँ निर्णय थियो ः असोज १ गतेदेखि नै लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खुल्ने ।
सोमबार साँझबाट सुरु भएको मन्त्रीपरिषद बैठक सकिएपछि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले असोज ५ गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय भएको बताएका थिए । तर, निर्णय सार्वजनिक हुँदा त्यो संसोधन भई असोज १ गते बन्न पुग्यो ।
'असोज ५ गते भनी गरिएको निर्णय असोज १ गते कसरी भयो, हामी आफैं आश्चर्यमा छौ ।' बिजशालाको सम्पर्कमा आएका ती मन्त्रीले भनेका छन्-' प्रधानमन्त्रीको इच्छामा निर्णयमा हेरफेर र डा. खतिवडालाई नियुक्तिको विषय परेको देखिन्छ । यसमा हामी आश्चर्य बन्नुबाहेक केही गर्न सक्दैनौं ।'